Leadership Leader, Lizzie McLeod on Women, Gender Equality and Change of Climate ... | Reef Resilience
Mar 16, 2017 | Vaovao
Ny fiovan'ny toetrandro dia misy fiantraikany amin'ny olona, ​​ny fiarahamonina, ary ny tontolo iainana manontolo, saingy tsy mitovy ny fizarana azy. Manerana izao tontolo izao, ny vehivavy dia iharan'ny fiantraikany amin'ny fahantrana, ny tsy fitoviana ara-politika ary matetika dia miankina amin'ny harena voajanahary noho ny fiveloman'izy ireo, ka mahatonga ny maha-lahy na maha-vavy ho singa manan-danja amin'ny toetry ny toetrandro.
Amin'izany fotoana izany, ny fampiroboroboana ny vehivavy any amin'ny siansa momba ny toetrandro sy ny fanapaha-kevitra dia manatanjaka ny hetsika ataon'ny haino aman-jery, manampy ireo vondrom-piarahamonina ho maharitra kokoa ary hampihena ny loza ara-tontolo iainana sy ekonomika
Ity Martsa ity, Lizzie McLeod, Ilay mpahay siansa momba ny toetr'andro an'ny Pacific Conservancy ho an'ny Pasifika, dia mampiantrano fifanakalozana fianarana ho an'ireo vehivavy manerana ny Nosy Pasifika hizara ny traikefany momba ny toetr'andro sy lesona nianarana. Mandritra ny atrikasa, i Lizzie dia hanampy amin'ny famahana ny vahaolana vaovao misy eo an-toerana, sady manitatra ny firotsahan'ny vehivavy amin'ny faharetana. Nahita an'i Lizzie izahay hiady hevitra momba ny asany momba ny laharam-pahamehana amin'ny lahy sy ny vavy sy ny toetrandro.
Vaovaon'ny mpiasa: Salama Lizzie. Lazao aminay ny momba anao: firy taona izay ianao no tao amin'ny TNC ary ahoana no nanombohanao an'ity asa ity?
Lizzie: Izaho dia tao amin'ny TNC nandritra ny 15 taona! Nanomboka tamin'ny maha-mpahay siansa haran-dranomasina ahy aho ary liana tamin'ny fikarohana ny fihetsiky ny haran-dranomasina amin'ny hafanan'ny hafanan'ny ranomasina. Ny fiovana lehibe indrindra tamin'ny asako dia nitranga rehefa nanomboka niasa akaiky kokoa tamin'ireo vondrom-piarahamonina amoron-dranomasina aho. Amin'ny maha-mpahay siansa an-dranomasina ahy dia azoko ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fikarohana hanodinana ny fiantraikan'ny toetrandro, saingy ny fiaraha-miasa amin'ireo vondrom-piarahamonina any Pasifika dia nampitombo ny fankasitrahako ireo vahaolana izay novolavolaina mivantana avy amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo. Manome taratra ny fironana misimisy kokoa amin'ny asan'ny Conservancy aho, nifindra ihany koa aho tamin'ny fifantohana amin'ny siansa voajanahary ka hatramin'ny fiatrehana ny fihaonan'ny olona sy ny natiora. Ny fiovan'ny toetrandro no loza mitatao tokana indrindra atrehin'ny vondron'olona Pacific Island, ka paikady manampy ny vondrom-piarahamonina sy ny tontolo iainana hanaraka tontolo miovaova no zava-dehibe.
Raha miara-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa, nahoana no zava-dehibe ny mifantoka amin'ny fitondrana vehivavy amin'ny fikarohana sy vahaolana amin'ny klima?
LM: Matetika ny vehivavy dia miatrika fidirana tsy mitovy amin'ny loharanon-karena voajanahary sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fivezivezena voafetra izay mety hahatonga azy ireo tsy ho voalanjalanja amin'ny fiovan'ny toetrandro. Mety hiatrika sakana ara-tsosialy, ara-toekarena ary politika koa ny vehivavy izay afaka mametra ny fahafahany miatrika ny fiatraikan'ny toetrandro. Saingy, ny fahasamihafana dia miovaova eo amin'ny vondrona sy olona ary koa rehefa mandeha ny fotoana. Tsy afaka mihevitra ny vehivavy ho vondrona "marefo" homogenized fotsiny isika. Ny fanaovana izany dia manakana antsika tsy hankasitraka sy hiatrika ny fifandraisan'ny herinaratra mifandraika amin'izany, sy ny anjara asa mavitrika ataon'ny vehivavy maro amin'ny fitantanana ny tontolo iainana, ny fanalefahana ny toetrandro ary ny fampifanarahana. Tokony hizaha ny fomba sy ny toe-javatra afaka miatrika ny vehivavy ny vokatra tsy mitovy amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary koa mamolavola vahaolana izay manangana ny fahafahany mamorona fiovana tsara sy maharitra eo amin'ny fiarahamonin'izy ireo.
Matetika ny vehivavy dia mitondra fomba fijery, fahalalana ary vahaolana samihafa amin'ny latabatra. Ny andraikitry ny vehivavy ao an-tranony sy ny vondrom-piarahamonina misy azy ary ny fitantanana ny harena voajanahary dia midika fa manakiana ny paikady natao hamahana ny fiovan'ny toetr'andro izy ireo. Ohatra, any amin'ny nosy Pasifika maro, ny vehivavy no tena mijinja talo voalohany - foto-tsakafo manan-danja sy ara-tsakafo atahoran'ny fiovan'ny toetr'andro. Noho izany, ny fandraisana an-tanana ny vehivavy dia manakiana ny famolavolana vahaolana maharitra momba ny toetrandro izay mifototra amin'ny fahalalany sy ny fahaizany nentim-paharazana amin'ny fitantanana ny loharano. Raha tsy ny siansa no namorona ny lahy sy ny vavy tamin'ny fikarohana nataony vao nahazo fahitana momba ny fomba fanao izay nampiasain'ny vehivavy izy ireo hanampiana ny toeram-piompiana hifanaraka amin'ny fidiran'ny rano masira, ny fanovana ny lamin'ny orana ary ny fiakaran'ny ranomasina. Na dia marina aza fa amin'ny faritra maro dia marefo indrindra amin'ny fiatraikan'ny toetrandro ny vehivavy, ny zavatra tsy raharahiana matetika dia izy ireo koa matetika no mitarika ny fanandramana vahaolana amin'ny toetrandro.
Inona no nanentana ny hevitrao amin'ny fifanakalozana fianarana vehivavy mifanohitra amin'ny atrikasa ho an'ny fiarahamonina midadasika?
LM: Raha tianao ny tantara marina, dia avy amin'ny atrikasa momba ny toetr'andro teo aloha no nipoiran'ilay hevitra rehefa nahita ny vehivavy nihazakazaka hiteny sy hahazo saka-antsoina hoe ny sasany amin'ireo lehilahy mpanatrika. Nampidirina am-ponja ny hevitr'izy ireo. Matetika ny vehivavy no manaiky ny fanapahan-kevitra momba ny tontolo iainana anisan'izany ny adihevitra politika momba ny fitehirizana sy ny fampiasana ny harena voajanahary, noho izany dia tianay ny hahita fomba iray hahazoana antoka fa ho re ny feon'izy ireo ary afaka manampy amin'ny fananganana vahaolana amin'ny toetr'andro izy ireo. Ity fifanakalozana fianarana ity no fotoana voalohany hiarahan'ireo vehivavy avy any Pasifika ireo amin'ny toerana iray hifanakalozana hevitra momba ny hevitra sy ny vahaolana momba ny toetr'andro. Amin'ny fampidirana ireo vehivavy ireo sy ny famoronana sehatra iray, dia mino izahay fa afaka manamarina ny anjara toeran'ny vehivavy milalao amin'ny fampifanarahana, manatanjaka ny fanatanterahana ny fampiharana ankehitriny, ary manampy amin'ny fampiasana ireo vahaolana manerana ny faritra.
Mifantoka amin'ny Pasifika ianao amin'ny asanao. Nahoana no zava-dehibe amin'ny vahaolana momba ny toetr'andro ity faritra ity?
LM: Ny nosy manerana ny Pasifika dia eo amin'ny laharana ara-bakiteny ny fiovan'ny toetr'andro ary anisan'ny mora tohina indrindra amin'ny tafio-dranomasina, ny fiakaran'ny ranomasina, ny fanamasinana ny ranomasina ary ny fiovan'ny toetr'andro. Ireo vokatra ireo dia efa tsapan'ny vondrom-piarahamonina any Pasifika, izay miteraka finiavana politika sy antony manosika handray andraikitra. Ny Nature Conservancy dia manana rakitsoratra fahombiazana naharitra 25 taona tany Pasifika ary manana fifandraisana amin'ireo mpitondra avy any an-toerana ka hatrany amin'ny sehatra nasionaly, izay manome antsika ny tombana roa sosona amin'ny fambolena vahaolana ho an'ireo vondrom-piarahamonina atahorana indrindra sy ny scaling. izy ireo hampihatra ny vahaolana manerantany. Ny tena zava-dehibe dia mifamatotra amin'ny tany ny mombamomba ny kolontsaina. Rehefa very ny tany dia very ny kolontsaina. Manana filàna ara-pitondrantena isika hampifantoka ny asantsika amin'ity faritra ity sy ny fotoana ahafahana mandray anjara mavitrika amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olona.